News - Horumarka taariikhiga ah iyo taxaddarrada mashiinka samaynta tuubooyinka
Mashiinka sameynta tuubada sibidhka waxyaabaha ugu muhiimsan waa Qalabka samaynta tuubbada extrusion radial taagan, hal iyo labalaab qalabka qalabka gariirka mandrel, qalabka qalabka gariirka mandrel, mashiinka alxanka duudduuban ee qaab bir bir ah oo otomaatig ah, mashiinka alxanka birta lagu rogo, mashiinka alxanka mesh, buuxinta qafis birta mashiinka alxanka, laalaada mashiinka samaynta biibiile, mashiinka samaynta biibiile centrifugal, saxaafada gudaha, saxaafada dibada iyo caaryada kala duwan ee biiyaha iyo mashiinka kale ee biibiile gariirka sameeya.
Ku Mashiinka qaadashada tuubada sibidhka waxay soo martay hagaajinta jiilba jiilka ka sudhan mashiinka rullaluistemadka bilowga ilaa gariirka mandrel mashiinka extrusion radialhadda. Sababtoo ahcaaryada biibiile gariirka udub dhexaad toosangeeddi-socodku wuxuu qaataa laba qaab oo ah qaab-dhismeedka dhumucda adag, adkaanta qaab-dhismeedka caaryada ayaa aad u adag in la rogrogo, oo keliya hal qaab oo caaryo ah ayaa looga baahan yahay hal qeexitaan, sidaa darteed wareega iyo dhexroorka dhuumaha la taaban karo ee la sameeyay waa heer. Intaa waxaa dheer, toosanmashiinka biibiile extrusion radial geedi socodka shubka galay mashiinka tuubada sibidhka ka dib dhammaadka jihada axial ee la taaban karo ee mar labaad rogrogmada wadnaha, si wax ku ool ah u kordhisa xoogga iyo dhererka sanka, dhismaha iyo rakibidda si habsami leh.
Heerkulka hooseeya xilliga jiilaalka, Mashiinka dhuumaha extrusion radial taagan dayactirku ma yaraan karo. Ma u baahan tahay inaad bedesho shaandhada naaftada, saliida mashiinka si aad u bedesho saliida sii kordheysa ee isku dhafan, isla waqtigaas, haddii nidaamka haydarka uu leeyahay meel ka daadaneysa saliida sidoo kale isbedel waqtiga ku habboon, waxay ku haboonaan kartaa taangiga si uu u qabto shaqo wanaagsan oo ah dahaadhka. Hubi nidaamka kala-baxa kuleylkaMashiinka qaadashada tuubada sibidhka, oo hubi in tuubada caaggu ay gabowday oo ay jaban tahay. Meelahan waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka xilliga qaboobaha. Markaad isticmaaleyso, waxaad ku dari kartaa xoogaa biyo kulul si ay kuugu fududaato inaad bilowdo. Ha iloobin inaad biyo daadisid markaad xireyso. Isticmaalka ka hortagga qaboojiyaha laguma talinayo maadaama ay adkeyneyso bilowga mishiinka.
Hex handarraabbadeedii, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Qaab dhismeedka, U Bolts, Lag Bolts, Gawaarida Gawaarida,